एकता समितिको बैठक अाज, कार्यदल प्रतिवेदन कसरी अनुमोदन हुन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
एकता समितिको बैठक अाज, कार्यदल प्रतिवेदन कसरी अनुमोदन हुन्छ ?
काठमाडौं– बहुप्रतिक्षित एमाले–माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक अाज बस्ने भएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको आन्तरिक छलफलपछि अाज साँझ ५ बजेलाई बैठक डाकिएको हो ।
बैठकमा पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउने छन् । पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेको लामो समयसम्म पनि पार्टी एकताको आधार मानिने प्रतिवेदन तयार नहुँदा एकता प्रकृया लम्बिँदै आएको थियो ।
प्रतिवेदन तयार नभएकाले एकता संयोजन समितिको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन ।गत फागुन सात गते बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक झण्डै डेढ महिनापछि मङ्गलबार बस्न लागेको हो ।
गत फागुन ७ गतेको बैठकमा दुई कार्यदल गठन गर्दै उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो ।
कार्यदललाई सुरुमा १५ दिनको समयसीमा दिएर प्रतिवेदन तयार गर्न भनिए पनि सो समयमा कार्यदलले काम नसकेपछि समय थप गरिएको थियो । दुवै कार्यदलले झण्डै डेढ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेसँगै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले समितिको बैठक बोलाएर प्रतिवेदन बुझ्ने भएका हुन् ।
प्रतिवेदन र त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुबारे एकता संयोजन समितिमा बृहद छलफल हुनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसैका आधारमा पार्टी एकता गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण अगावै पार्टी एकता घोषणा गर्ने भनिए पनि आन्तरिक तथा प्राविधिक विषयमा सहमति बाँकी नै रहेकाले नेताहरूले वैशाख ९ गतेलाई पार्टी एकता घोषणाको ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस फोरम पनि सरकारमा जाने, अाज साँझ वा भाेलि सपथ
‘कार्यदलले प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिमा बुझाएपछि प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयबारे समितिमा छलफल हुनेछ । सँगसँगै आआफ्नो पार्टीमा पनि छलफल गरिन्छ र त्यसबाट आउने सुझावहरू सहयोगी भए समेट्न सकिन्छ’, एकता संयोजन समतिका सदस्य तथा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
कार्यदलस्तरमा अधिकांश विषयमा पार्टी एकताका आधारमा एमाले र माओवादीबीच सहमति भए पनि पार्टीको चिन्ह, जनयुद्ध र केन्द्रीय समितिममा विवाद भएपछि सहमति जुटेको छैन ।
कार्यदलले यी तीन विषयमा पार्टी एकता समितिमै सहमति खोज्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर, कार्यदलस्तरमा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउँदै गर्दा एमाले–माओवादी एकताका लागि ५०–५० को अवधारणा सार्वजनिक भएपछि पुनः एकताबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठेका थिए ।
यसअघि असोज १७ गते पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका एमाले माओवादीले त्यही सहमतिअनुसार ६०–४० को आधारमा गत निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाएर चुनाव लडेका थिए ।
निर्वाचनपछि एमाले ७० र माओवादीले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा चुनाव जितेपछि पार्टी एकता गर्दा त्यसैलाई आधार बनाएर एकता गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड रहँदै आयो ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुँदैन– अग्नी सापकोटा
एमालेले यस्तो बताएपछि माओवादीले प्रतिशतका आधारमा नभएर समान हैसियत नभए पार्टी एकता नै हुन नसक्ने चेतावनी दियो । गत साता एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्ले ५०–५० को आधारमा मात्रै पार्टी एकता हुनसक्ने बताएपछि एकता प्रकृयामा नयाँ ट्विस्ट थपिएको थियो ।
यही बीचमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच दुई पटक यसबारेमा छलफलसमेत भयो । तर सहमति भने हुन सकेन ।जसका कारण कार्यदलमा यसबारे कुनै सहमति नभई प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइयो ।
नेताहरूका यी फरक फरक अभिव्यक्ति र अडान सार्वजनिक हुन थालेपछि तल्ला तहका नेता कार्यकर्तामा पार्टी एकता नहुने हो कि भन्ने एक किसिमको आशङ्का नै पैदा भयो ।
पार्टी एकताका लागि गठित विधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य तथा ओली निकट मानिएका एमाले नेता बेदुराम भुसालले माओवादीले भनेजस्तै विधानमा जनयुद्ध शब्द र ५०–५० को माग नछोडे पार्टी एकता गर्न असम्भव भएको बताएका छन् ।
दुवै पक्षका यी अडान कायमै रहे पार्टी एकता हुने भन्दा नहुने सङ्केत बढी देखिन थालेका छन् । यद्यपि गत असोज १७ गते पार्टी एकता गर्ने सङ्कल्प गरेका नेताहरूले यसबारेमा सहमति खोज्न सक्ने सम्भावना अझै कायमै रहेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यसअघि गत फागुन ७ बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोहीअनुसार एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवेदन र रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको विधान मस्यौदा कार्यदलले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर गत शुक्रबार नै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।
दुवै प्रतिवेदन तयार भए पनि शीर्ष नेताले समय अभाव भन्दै बुझेका थिएनन् । प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यदल सदस्यहरूले एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
एमाले माओवादी नेताहरूले फागुन ७ गते पार्टी एकताको सातबुँदे आधारमा हस्ताक्षर गरेका थिए । साथै पार्टीको सङ्गठन र अन्तरिम विधान बनाउन दुई कार्यदल बनाएको थियो ।
ट्याग्स: Left Unity, maoist-uml-meeting_